အသဲခိုကျအောငျ – My Blog
စံပယျရှငျးသနျ့ဆိုတဲ့သူမ… လှသညျ ယဉျသညျ… အသကျ၂၀ လှသှေးကွှယျလေးတငျမက ဖှံ့ထှားသောရငျ စှံ့ကားသောတငျတို့ကွောငျ့ ပုရိသတို့မကျြလုံးက သူမသှားရာကပျပါနတောကို ခံရသလောကျ မာနကွီးသူလေးလို့ နာမညျကွီးသူလေးရယျပါ… အဲ့မာနရှငျလေးရဲ့ မာနတှကေိုရိုကျခြိုးပွီး သူမရဲ့အငုံစိတျထဲကကာမစိတျတှကေို ဖျောယူပွီး သူမကိုအရှကျကုနျစရေုံမက လိငျကြှနျသဖှယျ ဖာသညျသဖှယျ ဆကျဆံနိုငျခဲ့သူက အမုနျးမဲ့ဂျေါလီ ချေါ နမွေတျလငျးရယျပါ… ဒီနလေ့ညျး နမွေတျလငျးလာမညျဆို၍ သူမမှာ တကိုယျရသေနျ့ရှငျးရေးကို သခြောစှာပွုလုပျထားရသညျ…. မကွာမီပဲ တံခါးဘဲလျမွညျသံကိုကွားလိုကျရ၍ တံခါးသှားဖှငျ့ပေးတော့ နမွေတျလငျးတယောကျဝငျလာသညျ… သူမလညျး နမွေတျလငျးရဲ့အနားတှငျ ဒူးထောကျထိုငျခလြိုကျပွီး ဖိနပျကွိုးကိုဖွညျကာ ခွအေိတျပါခြှတျပေးလိုကျသညျ… ထို့နောကျ နမွေတျလငျးရဲ့ နောကျတှငျရိုကြိုးစှာ ကပျပါလာခဲ့သညျ…။
နမွေတျလငျးက ဆကျတီပျေါတှငျထိုငျကာ စားပှဲခုံတှငျအသငျ့ရှိနသေော ကွကျဥကို ဖနျခှကျထဲတှငျဖောကျထညျ့ကာ သံပုရာသီးစိတျလေးညှဈပွီး သောကျလိုကျသညျ…. ထို့နောကျ မတျတပျရပျကာ ခုံဝိုငျးမှ ထှကျလိုကျပွီး ခုံနောကျခပျလှမျးလှမျးတှငျဒူးထောကျထိုငျနသေော စံပယျရှငျးသနျ့ရှတှေ့ငျ ခွထေောကျနှဈခြောငျးကို အနညျးငယျကားကာ ခါးကိုထောကျ၍ရပျလိုကျသညျနှငျ့စံပယျရှငျးသနျ့က အလိုကျသိစှာနှငျ့ ခါးပတျကိုဖွုတျ ဘောငျးဘီကို အတှငျးခံပါတပါတညျး ခြှတျခလြိုကျသညျနှငျ့ နမွေတျလငျးရဲ့ ဂျေါလီထညျ့ထားသော လီးညိုညိုကွီးပျေါလာသညျ…. နမွေတျလငျးက….. “§ကောငျမ လီးဆာနတေယျမလား လာစုပျပေးစမျး… ကွိုကျကုနျးမ ” လို့ နမွေတျလငျးရဲ့ ရငျ့သီးရိုငျးစိုငျးတဲ့ အမိနျ့ပေးသံအကွားမှာပဲ သူမစပလေး အရညျစဆို့ခဲ့ပွီ…။
” ဟုတျကဲ့ရှငျ့ ” ဆိုပွီး နမွေတျလငျးရဲ့လီးကို ၂ခကျြ၃ခကျြ ဂှငျးတိုကျပွီး ပါးစပျထဲကိုအသာငုံပွီး စစုပျပေးရုံမက လြှာတှနှေငျ့ပါ ဒဈကွားနှငျ့ လီးတခြောငျးလုံးအပွငျ ဥတှပေါ ငုံပေးယကျပေးပမေယျ့…. ” ဖာသညျမ သှားတှနေဲ့ မထိစနေဲ့နျော… နငျ့စောကျလကျက ဘာလုပျနတောလဲ ဥစုပျပေးနရေငျ လီးကိုဂှငျးထုပေးရတာမသိဘူးလားစပသာယားတတျတာ ဘာမှမတတျဘူး ” ပွောရုံမက သူမရဲ့ ဆံပငျတှကေို စုကိုငျပွီး သူ့လီးကို သူမပါးစပျထဲထညျ့ကာ ပါးစပျကိုလိုးတော့သညျ….တခကျြတခကျြ အာခေါငျထိမက လညျခြောငျးသို့ပငျ ဝငျလာသောလီးကွောငျ့ သူမမှာ ပြို့တကျခငျြနပေမေယျ့ မလှနျဆနျဝံ့…. နမွေတျလငျးက ပါးစပျကိုလိုးနရောမှ လီးတခြောငျးလုံးကို သူမပါးစပျထဲအကုနျထိုးထညျ့ပွီး သူမမကျြနှာနှငျ့ သူ့ဆီးခုံကို ဖိကပျထားလိုကျသောကွောငျ့ လီးမှေးတခြို့ရဲ့ ခပျကွမျးကွမျးအထိတှကေို့ ပါးပွငျနုနုက သိရှိခံစားလိုကျရသလို။
လညျခြောငျးထဲတိုးဝငျလာတဲ့ လီးရဲ့တခြို့တဝကျကို လညျခြောငျးကွှကျသားတှကေို အလုပျပေးလိုကျရသညျ…. နမွေတျလငျးမှာ စံပယျရှငျးသနျ့ရဲ့ ပါးစပျကိုလိုးလို့ ပွီးခငျြနပေမေယျ့ အားမရသေးတာမို့…. ” ဖာသညျမ နငျ့အကငြ်္ီခြှတျပွီး နငျ့နို့နဲ့ လုပျပေးစမျး ပွီးအောငျလုပျပေး ” လို့ပွောလိုကျသညျနှငျ့ စံပယျရှငျးသနျ့မှာ အမိနျ့ကိုမလှနျဆနျနိုငျပဲ အိမျနရေငျးဝတျထားသော ဂါဝနျရှညျကို ခေါငျးပျေါမှ အသာမခြှတျလိုကျသညျ… ပွီးနောကျ ဖှံ့ထှားသော နို့နှဈလုံးဖွငျ့ နမွေတျလငျးရဲ့ လီးကိုညှပျကာ ဂှငျးတိုကျပေးရငျး လီးထိပျရှိအပေါကျကိုပါ လြှာနှငျ့တို့ထိ ကလိပေးတော့ နမွေတျလငျးတယောကျ ၃မိနဈတောငျ မခံတော့ပဲ လီးရညျမြားကို သူမမကျြနှာသို့. ပနျးထုတျကာပွီးဆုံးလိုကျပွီး “ကောငျမ ငါ့လီးကို သခြောပွောငျအောငျ ယကျပေးစမျး ” ဆိုတဲ့အမိနျ့သံကွောငျ့ သူမခမြာ ကြုံ့ကြုံ့လေးထိုငျကာ လီးတခြောငျးလုံးပွောငျအောငျ ယကျပေးလိုကျရသညျ… နမွေတျလငျးမှာ ပွီးဆုံးခွငျးအရသာခံရရုံမက အယကျပါခံရငျး တကိုယျလုံးတုနျတကျကာ ဆီးသှားခငျြသလို ဖွဈလာတာမို့…….။
ကောငျမ ပါးစပျဟထားစမျး ” လို့ပွောပွီး စံပယျရှငျးသနျ့၏ မကျြနှာပျေါသို့ သေးမြားပနျးခလြိုကျသညျ…. စံပယျရှငျးသနျ့တယောကျ နမွေတျလငျးကွောငျ့ သေးတှစေိုသှားသလို သေးအခြို့ကိုလညျး ပါးစပျထဲသောကျသုံးလိုကျရတာမို့ ရခြေိုးခနျးတှငျ ပွနျလညျသနျ့စငျခဲ့ရပါတယျ….။နမွေတျလငျးကတော့ အိမျမကျမွူရဲ့ အှနျလိုငျး ကနေ မှာထားတဲ့ကရိယာတနျဆာပလာတှကေို ထုတျယူပွီးကွညျ့နလေရေဲ့… သူမှာထားတာတှကေလညျး ကွညျ့အုံးလေ… ဖငျပေါကျမှာ ထိုးတပျရတဲ့ ခှေးမွီးတဈခု ဗိုကျဗရတောချေါ တုနျခါစကျလေး ပွီးတော့ လီးတုတဈခြောငျး… သူတို့က ဘီဒီအပျအမျ မဆော့တာမို့ ကွာပှတျတို့ ကွိုးလကျထိပျ စတာတှမေလိုပမေယျ့ စံပယျရှငျးသနျ့လို မာနခဲ လူတှအေမွငျမှာ ရိုးရိုးအေးအေးယဉျယဉျလေးပမေယျ့ ကုပျကမွငျးလေး ဖွဈနတေဲ့ သူမကို သူ့ရဲ့လိငျကြှနျတဈယောကျလို နှိပျစကျဖို့ လိုအပျတာမို့ သူလှမျးမှာယူထားရခွငျးသာ….။
စံပယျရှငျးသနျ့တယောကျ ကွာနတောမို့ စိတျမရှညျသော နမွေတျလငျးတဈယောကျ… “စောကျဖာသညျမ မပွီးသေးဘူးလား… ငါစောငျ့နတောကွာလှပွီ တံခါးဖှငျ့ပွီး လေးဖကျကုနျးထှကျခဲ့စမျး ” လို့ပွောတဲ့ အမိနျ့သံအဆုံးမှာတော့ စံပယျရှငျးသနျ့တဈယောကျ လေးဖကျကုနျးရကျသားလေးထှကျလာရတာကို နမွေတျလငျးတယောကျ အရသာခံကွညျ့ပွီးအနောကျကနသှေားကာ… ” ဖာသညျမရေ နငျ့ကိုခှေးလိုးလိုးဖို့ ခှေးနဲ့တူရအောငျ ဒီအမွီးတကျပေးရမယျ… “ပွောပွောဆိုဆိုပဲ နမွေတျလငျးတယောကျ သူမဖငျပေါကျထဲကို အမွီးတပျတဲ့ ဘုလုံးကို ထိုးထညျ့လိုကျတယျ…. စံပယျရှငျးသနျ့မှာ နာကငျြလှပမေယျ့ သူမကို ဆဲသံ အမိနျ့ပေးသံတှကွေောငျ့ စောကျပတျက စောကျရညျတှေ တတောကျတောကျကပြွီး အလိုးခံခငျြစိတျတှေ တဖှားဖှားပေါကျနတောပေါ့…. “§ကောငျမ အဲ့အတိုငျး ကုတငျထိလိုကျပွီး ငါ့လီးစုပျပေး နငျ့ကိုခှေးလိုးလိုးပွီးမှ အဲ့အမွီးဖွုတျမယျ…” ပွောပွီး။
အိပျခနျးသို့ဝငျသှားသောနမွေတျလငျးနောကျသို့ စံပယျရှငျးသနျ့မှာ လေးဖကျကုနျးလိုကျသှားရလသေညျ…. အိပျခနျးထဲရှိ ကုတငျပျေါတှငျ ပကျလကျလှနျသော နမွေတျလငျးအပျေါ လေးဖကျကုနျးအနထေားဖွငျ့ လီးစုပျရနျလုပျခြိနျမှ နမွေတျလငျးက ” နအေုံး ” ဆိုကာ သူမစောကျဖုတျထဲသို့ တုနျခါစကျလေးထိုးထညျ့ပွီးမှ ပကျလကျပွနျလှနျတာမို့ သူမလညျး အိပျပြျောနသေော နဂါးကို လကျနဲ့အသာနှဈခကျြသုံးခကျြ ဂှငျးတိုကျပွီး ပါးစပျအတှငျးငုံကာ လီးစုပျပေးခြိနျ။နမွေတျလငျးက ဗိုကျဗရတော ရမုဒျကို ကစားပေးလိုကျနဲ့ သူမမှာ ဖငျထဲက အမွီးရဲ့တဈဆို့ဆို့ကတမြိုး စောကျဖုတျထဲက ဗိုကျဗရတောက နှိပျစကျတာတကွောငျး မိမိကို ပကျပကျစကျစကျပွောပွီး လိုးမယျ့လူရဲ့လီးကို စုပျပေးနရေတာတှကွေောငျ့ နမွေတျလငျးရဲ့လီး သူမပါးစပျထဲ တငျးပွညျ့ကပျြပွညျ့တောငျလာခြိနျပဲ သူမ တခြီပွီးမွောကျခဲ့ရသညျ။နမွေတျလငျးလညျး သူမပီးမှနျးလညျးသိ သူကိုယျတိုငျလိုးဖို့ အသငျ့ဖွဈတာနဲ့ပဲ…. “။
စောကျဖာသညျမ လီးစုပျရမဝသေးဘူးလား တျောတော့ ငါလိုးခငျြပွီ ဒီလောကျလီးကွိုကျတဲ့ ကွိုကျကုနျးမ ဖငျရော စောကျဖုတျရော ကှဲအောငျ လိုးပဈမယျ ” လို့ပွောပွီး ထကာ လေးဖကျကုနျးထားသော စံပယျရှငျးသနျ့ နောကျသို့သှားကာ နောကျတှငျ ပွူထှကျနပွေီးစောကျရညျတှရှေဲနသေော စောကျဖုတျဝတှငျ လီးကိုတပွေီ့း မညှာတမျး တဆုံးထိုးခပြဈလိုကျသညျ… စံပယျရှငျးသနျ့မှာ စောကျရညျတှရှေဲနလေို့ လီးအဝငျခြောသျောလညျး မညှာတာပဲ တဆုံးထိုးဆောငျ့လိုးခံရတာမို့ လီးမှာ မကွီးလှသျောငွား ဒဈကတမြိုး ဂျေါလီကတဖုံ အရှညျက ၆လကျမကြျောသညျမို့ အတျောခံစားလိုကျရသညျ….။နမွေတျလငျးကား စံပယျရှငျးသနျ့ ဘယျလိုနမေလဲ သူမတှေးပဲ သူမခါးကိုကိုငျကာ တဘှတျဘှတျမွညျအောငျ ဆောငျ့လိုးနလေသေညျ… လေးငါးဆယျခကျြခနျ့ ဆောငျ့လိုးပွီးသျော စံပယျရှငျးသနျ့မကျြနှာရှတှေ့ငျ ဒူးထောကျကာ လီးစုပျခံ၏… စံပယျရှငျးသနျ့က လီးကို လေးငါးခါလောကျ စုပျပေးပွီးလငျြ။
စောကျဖုတျကို ပွောငျးလိုးပွနျ၏… ပါးစပျမှလညျး… “ဖာသညျမ ငါလိုးမ ငါလိုးတာ ကောငျးတယျမလား… စောကျကွိုကျကုနျးမ ငါ့လီးကိုကွိုကျနတေယျမလား… လီးဆာမ ” စသညျ့ ယုတျမာရိုငျးစိုငျးသော ဆဲနညျးတှမြေားစှာဖွငျ့ ဆဲသလို သူမဖငျကိုလညျး တဖွနျးဖွနျးရိုကျ၏… စောကျဖုတျလိုး လီးစုပျခိုငျး၍ အားမရသေး ဖငျမှအမွီးကို ခြှတျကာ ဖငျကိုလိုးပွနျသေးသညျ… စံပယျရှငျးသနျ့မှာလညျး အဆဲခံရလေ စိတျလှုပျရှားလေ ဖွဈကာနောကျကို ဖငျကွီးပဈပဈပေးကာ ပါးစပျမှလညျး…. ” လိုးပါ… ဒီကွိုကျကုနျးမ အကို့ရဲ့ ဖာသညျမကို စောကျဖုတျတှေ ဖငျတှကှေဲအောငျသာ ဆောငျ့လိုးပဈပါ “လို့ ညဈညမျးစှာပွောရငျး မိနဈ ငါးဆယျ တဈနာရီသာသာလောကျမှာတော့ နမွေတျလငျးမှာ ဒုတိယအခြီပွီးခငျြလာတာမို့ သူမကို ထိုငျစကော မကျြနှာကို ဆှဲမော့ လီးကိုဂှငျးတိုကျပွီး လီးရညျမြားကို သူမမကျြနှာပျေါပနျးထုတျပဈရုံမက လြှာထုတျကာ လြှာကိုလီးနဲ့တဗတျဗတျရိုကျပွီး။
လီးရညျအကုနျစဈထုတျကာ ကုတငျပျေါလှဲကာ အနားယူမှေးစကျလိုကျတော့သညျ…။တရေးအိပျစကျလို့ အားပွညျ့သှားခြိနျမှာတော့ နိုးလာပွီးကွညျ့တော့ စံပယျရှငျးသနျ့တဈယောကျ သူ့အားဖကျကာ အိပျစကျနတောကို ကွညျ့ပွီး ဖွူစငျစှာလှတဲ့ မိနျးမလှလေးတဈယောကျမို့ သူနှိပျစကျတာကိုခံ သူ့ရဲ့လိငျကြှနျအဖွဈနနေတောက သူမထနျရုံတမြိုးထဲကွောငျ့ မဟုတျဘူးဆိုတာ သူသိပမေယျ့သူ့ရဲ့စိတျထဲမှာကို သူမကို အနိုငျရခငျြတဲ့စိတျက ပိုပွငျးထနျနသေညျ… ။ထိုစဉျမှာပဲ သူမလူးလှနျ့ပွီး မကျြစိဖှငျ့လာတာမို့ သူအသာကိုယျလုံးကိုကွှကာ ကုတငျပျေါရှိ ဆေးလိပျဗူးက ဆေးလိပျကိုယူကာ မီးညှိကာ ဖှာရှိုကျလိုကျသညျ… စံပယျရှငျးသနျ့မှာ နိုးထလာသညျနှငျ့ သူ့တာဝနျကို သိသညျ့နှယျ နမွေတျလငျး လီးကိုကိုငျကာပှတျသပျဆော့ကစားဂှငျးတိုကျရငျးမှ …. ” အကို အကို့ကို လကျဆောငျတခုထပျပေးမယျနျော… အကို လငျးလကျမွငျ့ဝဆေိုတဲ့ ဆယျလီမကို လိုးခငျြတယျလို့ ပွောဖူးတယျနျော။
သူအစဈမဟုတျပမေယျ့ သူနဲ့ဆိုဒျတူ ကိုယျလုံးကိုယျပေါကျတူရငျ အကိုကွိုကျမယျထငျတယျ… စံပယျ့သူငယျခငျြးတယောကျက စံပယျတို့အကွောငျး အကုနျသိထားပွီး သူကလညျး အကိုနဲ့ ခံကွညျ့ခငျြလို့တဲ့ အဲ့သာ ခဏနသေူလာလိမျ့မယျအကို… ။အကိုအိပျပြျောတော့ စံပယျဖုနျးဆကျချေါထားပွီးပွီ… သူ့ကိုပဲ လငျးလကျမွငျ့ဝလေို့မှတျလိုကျပေါ့… ” လို့ပွောတော့ နမွေတျလငျးလညျး အကွိုကျပိုတှကေ့ာ…. ” အငျးလေ သူက ခံခငျြသပဆိုလညျး လိုးပေးရတာပေါ့… သရီးစမျးကွတာပေါ့ကှာ ချေါလိုကျပါ ” လို့ပွောတော့ သဇငျရှငျးသနျ့တဈယောကျ ဖုနျးကိုယူကာ သူ့သူငယျခငျြးအား လှမျးချေါလိုကျသညျ…. ဆယျမိနဈလောကျအကွာမှာတော့ သူ့သူငယျခငျြးရောကျရှိလာ၍ စံပယျက တံခါးကို ထဖှငျ့ပေးတော့ ဝတျလဈစလဈနဲ့ စံပယျရှငျးသနျ့ရဲ့ ကြော့ရှငျးတဲ့ စံပယျ့နောကျကိုကွညျ့ပွီး ငါလိုးခဲ့တာ တကယျ့အမိုကျစားပါလားလို့ အတှေးနဲ့ ကနြေပျနတေုနျး…. စံပယျ့သူငယျခငျြးဖွဈသူ ဝငျလာကာ…. ”။
ဟယျကောငျမ အဝတျတထညျတောငျမကပျဘူး ပှဲကွမျးနတေယျပေါ့လေ… ထခကျြ ဟီးဟီး “ဆိုပွီး သူတို့အခငျြးခငျြး စနောကျပွောသံတှကေို နမွေတျလငျးကွားနရေတယျ…. ပွီးတော့ မကွာခငျပဲ နှဈယောကျသား အိပျခနျးသို့ဝငျမယျအလုပျမှာ နမွေတျလငျးက….” လငျးလကျ မငျးပါ အဝတျတှေ ခြှတျလာခဲ့… ငါမငျးကို ကွညျ့မယျ” လို့အမိနျ့ပေးသံအဆုံးမှာ စံပယျရော လငျးလကျမွငျ့ဝနေရောသရုပျဆောငျပေးမယျ့ စံပယျ့သူငယျခငျြးပါ ဝတျလဈစလဈနဲ့ ဝငျလာခဲ့ကွတယျ။လငျးလကျကိုကွညျ့တော့ တကယျသူလိုးခငျြနတေဲ့ လငျးလကျအောငျ ချေါ လငျးလကျမွငျ့ဝလေိုပဲ နို့ကွီးကွီး ဖငျကွီးကွီး စောကျဖုတျဖောငျးဖောငျးနဲ့ရယျ… ။မကျြနှာသိပျမတူပမေယျ့ နှုတျခမျးမှာသှားတူနပွေနျသညျ… ဒီလောကျဆို သူကနြေပျပွီလေ နမွေတျလငျးလညျး….. ” လငျးလကျ မငျးရဲ့နှုတျခမျးတှေ လြှာတှနေဲ့ ငါ့လီးကို လာစုပျယကျပေးစမျး… စံပယျ မငျးက ငါ့ခွမေတှအေရငျစုပျပေး ပွီးမှ ဖွညျးဖွညျးခွငျး အပျေါတကျလာပွီး လငျးလကျရဲ့ ဖငျနဲ့ စောကျဖုတျကို ယကျပေးလိုကျ… “နမွေတျလငျးရဲ့ အမိနျ့ကို နှဈယောကျသား စောဒက မတကျဝံ့…။
နမွေတျလငျးခိုငျးသမြှကို လုပျပေးကွဖို့ အသီးသီး ခုတငျပျေါတကျ နရောယူလိုကျကွသညျ…. ထို့နောကျ နမွေတျလငျးမှာ လငျးလကျရဲ့ ကြှမျးကငျြတဲ့ လီးစုပျပေးနမှေုကို စတငျခံစား ဇိမျယူရငျးကသူအရမျးလုပျခငျြနတေဲ့ လငျးလကျအောငျကို မကျြစိထဲသှားမွငျကာ ပိုမိုစိတျကွှလာပွီး လငျးလကျရဲ့ ခေါငျးကို ဖိကာဖိကာ ပါးစပျကို လိုးနခြေိနျမှာ…. စံပယျရှငျးသနျ့တဈယကျေ နမွေတျလငျးရဲ့ ခွမေတှကေို ခဏတာစုပျပေးပွီး။နမွေတျလငျးရဲ့ ခွသေလုံး ခွကေငျြးဝတျတို့ကို လြှာနဲ့တို့ထိကစားပွီး ဖငျကွီးထောငျကာ နမွေတျလငျးအား လီးစုပျပွီး အပီပွုစုနတေဲ့ လငျးလကျအောငျရဲ့ စောကျဖုတျမှသညျ ဖငျဝတိုငျအောငျ လြှာဖွငျ့သိမျးယကျတော့ လငျးလကျအောငျတယောကျ အသဲခိုကျအောငျ ယားသှားသညျမို့ အသံထှကျညညျးခငျြပမေယျ့ နမွေတျလငျးက ခေါငျးကိုမလှတျတမျးကိုငျကာ ဖိခနြသေညျမို့… အု အု ဆိုသောအသံသာ ထှကျလာသညျ……။
နမွေတျလငျးမှာ လငျးလကျအောငျရဲ့ ပါးစပျကို စိတျကွိုကျလိုးပီးသောအခါ သူ၏လီးကွီးမှာ တံတှေးမြားဖွငျ့ တငျးပွောငျကာ မာတောငျရုံမက သူ့ဂျေါလီအတောငျ့ကွီးကလညျး ထငျးလငျးစှာ ပျေါနသေညျ…. “လငျးလကျအောငျ ဖငျထောငျပေးစမျး… နငျ့ဖငျကွီးက လိုးလို့ကောငျးမယျ… ဟိုကောငျမစံပယျ… နငျလငျးလကျရဲ့ စောကျစကေို့ ယကျပေးလိုကျစမျး “လို့ နမွေတျလငျးရဲ့ အမိနျ့အဆုံးမှာတော့ လငျးလကျအောငျက မှယေ့ာပျေါကိုယျကိုမှောကျခြ ဒူးကိုထောကျပွီး ဖငျကိုထောငျပေးထားလိုကျသညျ…။စံပယျကလညျး နမွေတျလငျးခိုငျးတဲ့အတိုငျး လငျးလကျအောငျ ဖငျထောငျထားတဲ့အောကျမှ ခေါငျးလြိုဝငျလိုကျရာ နမွေတျလငျးက စံပယျ့စောကျဖုတျထဲ တုနျခါစကျလေးကို ထညျ့ပေးလိုကျပွီး ရမုဒျကို လငျးလကျအောငျလကျထဲထိုးထညျ့လိုကျသညျ…. ။ထို့နောကျ သူတို့နှဈယောကျကို ကားယားခှကာ လငျးလကျအောငျဖငျဝစူပှပှကို လီးတပွေီ့း ဒဈကို ထိုးသှငျးလိုကျသညျ…..။
လငျးလကျအောငျမှာ ဖငျခေါငျးထဲ လီးဒဈကွီး တိုးဝငျလာသညျ့ ဒဏျကွောငျ့ တဈဆို့ဆို့နဲ့ ခံရခကျသလို စံပယျက စောကျစယေ့ကျပေးနလေို့ တမြိုးကောငျးပွီး အရသာနှဈခုရောထှေးကာ …အီး… ခနဲ ငွီးသံပေးပွီး လကျသီးစုပျတော့ တုနျခါစကျရမုဒျလေးကို ဖိမိရာ စံပယျ့ခမြာ ထှနျ့ထှနျ့လူးရပွနျသညျ…. နမွေတျလငျးကလီးကို တဆုံးထိထိုးထညျ့ပွီး ဖွညျးဖွညျးနှဲ့လိုးလိုကျ ကွမျးကွမျးဆောငျ့လိုးလိုကျနဲ့မို့ လငျးလကျအောငျ ဖငျဇိမျတှကေ့ာ စောကျရညျတှေ ဒလဟောထှကျလာသလို စံပယျမှာလညျး တုနျခါစကျဒဏျကိုမြော့နအေောငျခံစားရသညျ… နမွေတျလငျးမှာ သူမှနျးပွီးထုနတေဲ့ လငျးလကျအောငျဖငျနဲ့တူတဲ့ ဖငျကို လိုးနရေသညျမို့. စိတျပိုကွှကာ ဆောငျ့လိုးနရောမှ ညောငျးလာတာမို့ ။ဖငျထဲမှ လီးကိုခြှတျ လငျးလကျအောငျရဲ့ ခွထေောကျတဖကျမကာ ပကျလကျလုပျပွီး စောကျဖုတျဝကို လီးတပွေီ့း တရှိနျထိုး ဆောငျ့သှငျးပဈသညျ…. လီးတဆံးဝငျပွီး ဆီးခုံနှဈခုကပျခြိနျမှာ။
“စံပယျ လီးတု ယူထားပေးစမျး ” လို့ပွောပွီး လငျးလကျအောငျရဲ့ နို့ကိုကိုငျပွီး ခွထေောကျနှဈခြောငျးကို ထမျးပွီး ဆောငျ့လိုးပဈရာ….လိုးသံတဖတျဖတျနဲ့ လငျးလကျအောငျရဲ့ ညီးသံတခြို့က အခနျးမှာ စီနအေောငျထှကျပျေါလာသညျ…. စံပယျမှာ နမွေတျလငျး လီးတုယူခိုငျး၍ ယူပေးလာပမေယျ့ လငျးလကျအောငျ လကျသီးစုပျလိုကျတိုငျး သူ့စောကျဖုတျထဲက တုနျခါစကျကွောငျ့ စောကျရညျတှကေ ပေါငျမှနစေီးကနြသေညျ…. နမွေတျလငျးက… လငျးလကျအောငျကို လိုးနရေငျးက” ဟိုဖာသညျမ နငျ့စောကျဖုတျထဲကဟာကို ထုတျတော့… ဖီးတကျမနနေဲ့ ပွီးရငျ အဲ့လီးတု နငျ့စောကျဖုတျထဲ ဝငျသလောကျထညျ့ ကိုယျ့ဖာသာလိုးထား…ငါဒီဟာမကို ဝအောငျလိုးအုံးမယျ…. အားပါး ကောငျးလိုကျတာကှာ…. စောကျဖုတျကလညျး ဖောငျးပွီးစီးနတောပဲ… ။ဖငျလိုးတုနျးကလညျး ကွပျနတောပဲ…လီးစုပျလညျးတျောတယျ…ပွီးမှ လီးတုနဲ့ ငါ့လီး သူ့ဖငျနဲ့ စောကျဖုတျကို ညှပျခအြုံးမယျ….”။
ပွောလညျးပွော လိုးလညျးလိုးရာ လငျးလကျအောငျခမြာ မကျြလုံးပငျပွူးခငျြဖွဈပွီး စိတျထဲပိုလှုပျရှားသှားကာ… ” ။လိုး လိုး…ရှငျလိုးခငျြသလောကျလိုး လိုးခငျြသလိုသာလိုး စောကျဖုတျနဲ့ ဖငျတဆကျထဲဖွဈအောငျ ကှဲသှားပစေ လိုးပလိုကျ.. အမလေးနျော… ဒဈကွီးကလညျးထိ ဂျေါလီကွီးကလညျးထိ ကောငျးလိုကျတာ….ဆောငျ့လိုးပဈပါ “အျောရငျးနဲ့ပဲ….နမွေတျလငျး ဆောငျ့လိုးသမြှကို ခံနရောမှ အခကျြ၇၀ခနျ့မရှိတရှိမှာတော့ အပေးအယူညီမြှမှုတှကွေောငျ့ နမွေတျလငျးမှာ ပွီးခငျြလာတာနဲ့ ပိုမွနျမွနျဆောငျ့လိုးပွီး…. ” အား…ငါပွီးတော့မယျ လငျးလကျရေ မငျးရော “” ကမြလညျး ပွီးပွီ ဆောငျ့ဆောငျ့ ပွီးရငျ ကမြနို့ပျေါနဲ့မကျြနှာပျေါလီးရညျတှေ ဖွနျးခပြေးပါ “ဆိုတာနဲ့ နမွေတျလငျးလညျး စောကျဖုတျက လီးကိုခြှတျ လငျးလကျအောငျပျေါ မတျတပျခှရပျလိုကျပွီး လငျးလကျအောငျနို့နဲ့ မကျြနှာပျေါ ဂှငျးတိုကျကာ လီးရညျမြား ဖွနျးထုတျလိုကျသညျ…ပွီးမှ…. ” ဟိုကောငျမ စံပယျ….။
ငါ့လီးကို သနျ့ရှငျးရေးလာလုပျပေးအုံး ” လို့ဆိုတော့ စံပယျ့ခမြာ သူတို့လိုးတာကိုကွညျ့ ကိုယျ့ဖာသာ လီးတုနဲ့လိုးလို့ ပွီးစနားမယျကနျြသေး နမွေတျလငျးရဲ့ လီးကို ပွနျစုပျပေး လြှာနဲ့ ယကျပေးကာ သနျ့ရှငျးရေးလုပျပေးလိုကျရသညျ….။လငျးလကျအောငျနဲ့ စံပယျရှငျးသနျ့ကို တနကေုနျလိုးပွီးသောအခါ ညနစေောငျးမှာ လငျးလကျအောငျပွနျသှားပမေယျ့… နမွေတျလငျးက မပွနျသေးပဲ စံပယျရှငျးသနျ့ကို ထပျမံနှိကျစကျဖို့ ကနျြနခေဲ့လသေညျ…. ” ဟဲ့ဖာသညျမ ငါရခြေိုးမယျ လိုကျခြေးတှနျးပေးစမျး ” ဆိုကာ ကိုယျတုံးလုံးဖွငျ့ ရခြေိုးခနျးသို့ဝငျသှားသော နမွေတျလငျး နောကျသို့ အဝတျဗလာဖွငျ့ လိုကျရပွနျသညျ…နမွေတျလငျးရဲ့ တကိုယျလုံးကို ဆပျပွာတိုကျပေးရုံမက လီးပါသခြောဆေးပေးရသညျ…လြှာဖွငျ့ယကျပေးရသညျ… ပွနျထှကျတော့လညျး ဘာမှပေးမဝတျပဲ ကိုယျတုံးလုံးဖွငျ့ စားစရာ စီစဉျခိုငျးသညျ….သူစားနခြေိနျမှာ သူ့ရှတှေ့ငျ ကုနျးပွီး ကွမျးတိုကျခိုငျးကာ သူကမကျြစိအရသာခံ ကွညျ့နသေညျ….။
နမွေတျလငျးမှာ စံပယျရှငျးသနျ့တယောကျ မိမှေးတိုငျးဖမှေးတိုငျး လှပကြော့ရှငျးသော ကိုယျလုံးလေးဖွငျ့လေးဖကျကုနျးကာ ကွမျးတိုကျစဉျ နောကျတှငျပွူထှကျနသေော စောကျဖုတျနှငျ့ ဖငျတှကေိုကွညျ့ပွီး မိမိစိတျကွိုကျ အသုံးတျောခံထားရသညျကို တှေးရငျးအထူး ကနြေပျအားရနသေညျ…။နောကျဆုံးအဆငျ့အနနေဲ့ မိမိစိတျခခြငျမငျရဆုံး သူငယျခငျြးတယောကျနှငျ့ပေါငျး နှဈယောကျတဈယောကျ ညှပျခဖြို့ထိ ဆုံးဖွတျထားသညျ… သူမသညျ သူ့လကျခုပျထဲကရလေို ဖွဈနသေညျ… သူဘာမှကွိုးမကိုငျရပဲ အကပျြမကိုငျရပဲကို သူမ၏ ပငျကိုယျစိတျကွောငျ့ပငျ… သူမကိုသူမမသိသော အတှငျးစိတျသဏ်ဍနျက သူ့အတှကျအကွိုကျ ဖွဈနစေခေဲ့သညျ… သူစားပွီးသောအခါ… ” ဟိုကောငျမ လာအုံး လေးဖကျကုနျးပီးပဲလာခဲ့ ” ” ဟုတျကဲ့ “ဆိုကာ နမွေတျလငျးရဲ့ အမိနျ့အတိုငျး လေးဖကျကုနျးပွီးရောကျလာခြိနျ…. ” ဖာသညျမ ငါ့လီးစုပျခိုငျးမို့ ချေါနတော လာ လီးလာစုပျစမျး။
“နမွေတျလငျးရဲ့ ကွမျးတမျးတဲ့ အမိနျ့အဆုံးမှာ စံပယျရှငျးသနျ့တယောကျ စောကျဖုတျလေးမြားပငျ ရှုံ့သှားသညျထိ စိတျလှုပျရှားကာ အရညျကွညျမြား ထှကျလာသညျ… ပွငျပမှာ မိမိကိုဆဲဖို့ မပွောနဲ့ စကားမာမာနဲ့ ကြောသလိုပွောတာတောငျ မကွိုကျတဲ့သူမက သူမကို ဖာသညျမလို့ဆဲပွီး ဖာသညျတဈယောကျလို ဆကျဆံတာကို အထူးကနြေပျစိတျလှုပျရှားသညျ…။လူတိုငျးက ဖူးဖူးမှုတျထားတဲ့ အလှဘုရငျမလေးကို ထိုသူက သူ့ကြှနျတယောကျလို ကွေးစားဖာသညျတဈယောကျလို ကွငျနာမှုမရှိသမြှ သူမရငျခုနျစိတျလှုပျရှားခဲ့ရသညျ…. အခုလညျး သူ့လီးကွီးကို သူမစုပျပေးနတောကို အားရပုံမပျေါပဲ သူမခေါငျးကိုကိုငျကာ ကော့ကော့ပွီး သူမပါးစပျကို လိုးနသေလို…..ပါးစပျကလညျး…. ” တျောတျောလီးကွိုကျတဲ့ ဖာသညျမ စုပျစမျး… ကောငျးလိုကျတာ လီးဒီလောကျကွိုကျတဲ့ ကွိုကျကုနျးမ ဒီလီးတငျမက နောကျလီးတှလေညျး ကွုံရအောငျ နငျ့ကို လုပျပေးအုံးမယျ… စုပျစမျး ဆိုပွီး။
တဖှဖှရှတျသံ ဆဲသံတှေ ကွားမှာ သူမစောကျဖုတျက စောကျရညျတှေ စီးကနြလေရေဲ့… သူမကို သူ့အပွငျတခွား လူတှနေဲ့ပါ ပေးလိုးအုံးမယျတဲ့… ဘယျလိုလူတှမြေားလဲ….စတဲ့အတှေးတှနေဲ့ သူမပါးစပျထဲညှောငျ့လိုးလားတဲ့ လီးကို အားရစှာ စုပျပေးနစေဉျပဲ… သူမခေါငျးကို ဆောငျ့တှနျးကာ…. ” ဖာသညျမ လီးစုပျလို့ကို မဝနိုငျပုလား… ငါလိုးခငျြပွီ… ဖငျထောငျပေးထားစမျး… နငျ့ဖငျကို အရငျလိုးမယျ… ”။လို့ဆဲ့သံနဲ့ ပါးစပျထဲက လီးက သူမနှုတျခမျးဘေးသားတှကေို ခြိတျကာ ပလှတျခနဲမွညျအောငျ ထှကျသှားလို့ အနညျးငယျနာကငျြပမေယျ့ သူ့အမိနျ့သံကွောငျ့ သူမ ကွမျးပွငျမှာ အားလြားမှောကျ ဖငျထောငျပေးလိုကျရသညျ….။နမွေတျလငျးတဈယောကျ ကွမျးပွငျမှာ ဖငျလေးထောငျထားသော စံပယျရှငျးသနျ့ရဲ့ ဖငျဝကို ထှီခနဲ မွညျအောငျ တံတှေးထှေးခလြိုကျပွီး… ဖငျဝကို လီးတကေ့ာ ကွမျးကွမျးပဲ ဆောငျ့ထိုးတော့ ” အ: ..နာလိုကျတာ ဖွညျးဖွညျးလုပျပါရှငျ ” လို့ စံပယျရှငျးသနျ့တယောကျ တောငျးပနျပမေယျ့… နမွေတျလငျးကတော့ ” ဖာသညျမ နငျက နာသေးလား ဒီလောကျလိုးထားလို့ အပေါကျကယျြနပွေီကို။
နာရငျ နငျ့စောကျစေ့ နငျခနြေလေေ မသာမ ငါ့ကို လာပွီး ဖွညျးဖွညျးလုပျပါ မွနျမွနျလုပျပါ နငျ့မှာ ပွောခှငျ့မရှိဘူး ငါလိုးခငျြသလို လိုးမှာ နငျ့စောကျဖုတျတှေ ဖငျတှေ ပွဲနအေောငျလိုးပဈမှာ သိလား။စောကျကောငျမရဲ့… ” ရငျ့သီးတဲ့ စကားတှကေိုကွားရပွီး သူမဖငျကွှကျသားတှကေ သူ့လီးကို ညှဈကစားလိုကျသလို သူမစောကျဖုတျက စောကျရညျတှေ ဒလဟော လိုကျလာသညျ… သူမပွီးခငျြနပွေီ… သူလီးထညျ့ရုံရှိသေးတာ… သူ့အမိနျ့သံကွောငျ့ သူမပွီးခငျြနပွေီ… ” ဟုတျကဲ့ပါ အကို့စိတျကွိုကျသာလိုးပါရှငျ အကို့ရဲ့ ဖာသညျမလေးပါ … အကို့ဖာသညျမကို အကိုကွိုကျသလိုလိုးပါ ” လို့ သူမမထငျမှတျခြိနျ သူမပါးစပျက ထှကျပျေါလာတဲ့ စကားတှကွေောငျ့ပဲ သူမမှ တကွောငျးပွီးသှားခဲ့ပမေယျ့ နမွေတျလငျးရဲ့ ကွမျးတမျးတဲ့ ဖငျလိုးမှုကို စောကျစလေ့ေးကြိနျးနအေောငျ ခရြေငျးက…။သူမသိသညျ… အကိုတယောကျ သူ့ဖာသညျမလေး ကမြကို သူလီးတောငျတိုငျး လိုးနမေယျဆိုတာ…ဒီတညဟာ… ကမြရဲ့ စောကျဖုတျတှေ ဖငျတှပွေဲနအေောငျ အလိုးခံရအုံးမယျ… အကို့ရဲ့ ဆဲသံဆိုသံတှနေဲ့ အမိနျ့သံတှကွေားမှာ မိုးလငျးမယျဆိုတာ……ပွီးပါပွီ။
စံပယ်ရှင်းသန့်ဆိုတဲ့သူမ… လှသည် ယဉ်သည်… အသက်၂၀ လှသွေးကြွယ်လေးတင်မက ဖွံ့ထွားသောရင် စွံ့ကားသောတင်တို့ကြောင့် ပုရိသတို့မျက်လုံးက သူမသွားရာကပ်ပါနေတာကို ခံရသလောက် မာနကြီးသူလေးလို့ နာမည်ကြီးသူလေးရယ်ပါ… အဲ့မာနရှင်လေးရဲ့ မာနတွေကိုရိုက်ချိုးပြီး သူမရဲ့အငုံစိတ်ထဲကကာမစိတ်တွေကို ဖော်ယူပြီး သူမကိုအရှက်ကုန်စေရုံမက လိင်ကျွန်သဖွယ် ဖာသည်သဖွယ် ဆက်ဆံနိုင်ခဲ့သူက အမုန်းမဲ့ဂေါ်လီ ခေါ် နေမြတ်လင်းရယ်ပါ… ဒီနေ့လည်း နေမြတ်လင်းလာမည်ဆို၍ သူမမှာ တကိုယ်ရေသန့်ရှင်းရေးကို သေချာစွာပြုလုပ်ထားရသည်…. မကြာမီပဲ တံခါးဘဲလ်မြည်သံကိုကြားလိုက်ရ၍ တံခါးသွားဖွင့်ပေးတော့ နေမြတ်လင်းတယောက်ဝင်လာသည်… သူမလည်း နေမြတ်လင်းရဲ့အနားတွင် ဒူးထောက်ထိုင်ချလိုက်ပြီး ဖိနပ်ကြိုးကိုဖြည်ကာ ခြေအိတ်ပါချွတ်ပေးလိုက်သည်… ထို့နောက် နေမြတ်လင်းရဲ့ နောက်တွင်ရိုကျိုးစွာ ကပ်ပါလာခဲ့သည်…။
နေမြတ်လင်းက ဆက်တီပေါ်တွင်ထိုင်ကာ စားပွဲခုံတွင်အသင့်ရှိနေသော ကြက်ဥကို ဖန်ခွက်ထဲတွင်ဖောက်ထည့်ကာ သံပုရာသီးစိတ်လေးညှစ်ပြီး သောက်လိုက်သည်…. ထို့နောက် မတ်တပ်ရပ်ကာ ခုံဝိုင်းမှ ထွက်လိုက်ပြီး ခုံနောက်ခပ်လှမ်းလှမ်းတွင်ဒူးထောက်ထိုင်နေသော စံပယ်ရှင်းသန့်ရှေ့တွင် ခြေထောက်နှစ်ချောင်းကို အနည်းငယ်ကားကာ ခါးကိုထောက်၍ရပ်လိုက်သည်နှင့်စံပယ်ရှင်းသန့်က အလိုက်သိစွာနှင့် ခါးပတ်ကိုဖြုတ် ဘောင်းဘီကို အတွင်းခံပါတပါတည်း ချွတ်ချလိုက်သည်နှင့် နေမြတ်လင်းရဲ့ ဂေါ်လီထည့်ထားသော လီးညိုညိုကြီးပေါ်လာသည်…. နေမြတ်လင်းက….. “§ကောင်မ လီးဆာနေတယ်မလား လာစုပ်ပေးစမ်း… ကြိုက်ကုန်းမ ” လို့ နေမြတ်လင်းရဲ့ ရင့်သီးရိုင်းစိုင်းတဲ့ အမိန့်ပေးသံအကြားမှာပဲ သူမစပလေး အရည်စဆို့ခဲ့ပြီ…။
” ဟုတ်ကဲ့ရှင့် ” ဆိုပြီး နေမြတ်လင်းရဲ့လီးကို ၂ချက်၃ချက် ဂွင်းတိုက်ပြီး ပါးစပ်ထဲကိုအသာငုံပြီး စစုပ်ပေးရုံမက လျှာတွေနှင့်ပါ ဒစ်ကြားနှင့် လီးတချောင်းလုံးအပြင် ဥတွေပါ ငုံပေးယက်ပေးပေမယ့်…. ” ဖာသည်မ သွားတွေနဲ့ မထိစေနဲ့နော်… နင့်စောက်လက်က ဘာလုပ်နေတာလဲ ဥစုပ်ပေးနေရင် လီးကိုဂွင်းထုပေးရတာမသိဘူးလားစပသာယားတတ်တာ ဘာမှမတတ်ဘူး ” ပြောရုံမက သူမရဲ့ ဆံပင်တွေကို စုကိုင်ပြီး သူ့လီးကို သူမပါးစပ်ထဲထည့်ကာ ပါးစပ်ကိုလိုးတော့သည်….တချက်တချက် အာခေါင်ထိမက လည်ချောင်းသို့ပင် ဝင်လာသောလီးကြောင့် သူမမှာ ပျို့တက်ချင်နေပေမယ့် မလွန်ဆန်ဝံ့…. နေမြတ်လင်းက ပါးစပ်ကိုလိုးနေရာမှ လီးတချောင်းလုံးကို သူမပါးစပ်ထဲအကုန်ထိုးထည့်ပြီး သူမမျက်နှာနှင့် သူ့ဆီးခုံကို ဖိကပ်ထားလိုက်သောကြောင့် လီးမွှေးတချို့ရဲ့ ခပ်ကြမ်းကြမ်းအထိတွေ့ကို ပါးပြင်နုနုက သိရှိခံစားလိုက်ရသလို။
လည်ချောင်းထဲတိုးဝင်လာတဲ့ လီးရဲ့တချို့တဝက်ကို လည်ချောင်းကြွက်သားတွေကို အလုပ်ပေးလိုက်ရသည်…. နေမြတ်လင်းမှာ စံပယ်ရှင်းသန့်ရဲ့ ပါးစပ်ကိုလိုးလို့ ပြီးချင်နေပေမယ့် အားမရသေးတာမို့…. ” ဖာသည်မ နင့်အင်္ကျီချွတ်ပြီး နင့်နို့နဲ့ လုပ်ပေးစမ်း ပြီးအောင်လုပ်ပေး ” လို့ပြောလိုက်သည်နှင့် စံပယ်ရှင်းသန့်မှာ အမိန့်ကိုမလွန်ဆန်နိုင်ပဲ အိမ်နေရင်းဝတ်ထားသော ဂါဝန်ရှည်ကို ခေါင်းပေါ်မှ အသာမချွတ်လိုက်သည်… ပြီးနောက် ဖွံ့ထွားသော နို့နှစ်လုံးဖြင့် နေမြတ်လင်းရဲ့ လီးကိုညှပ်ကာ ဂွင်းတိုက်ပေးရင်း လီးထိပ်ရှိအပေါက်ကိုပါ လျှာနှင့်တို့ထိ ကလိပေးတော့ နေမြတ်လင်းတယောက် ၃မိနစ်တောင် မခံတော့ပဲ လီးရည်များကို သူမမျက်နှာသို့. ပန်းထုတ်ကာပြီးဆုံးလိုက်ပြီး “ကောင်မ ငါ့လီးကို သေချာပြောင်အောင် ယက်ပေးစမ်း ” ဆိုတဲ့အမိန့်သံကြောင့် သူမခမျာ ကျုံ့ကျုံ့လေးထိုင်ကာ လီးတချောင်းလုံးပြောင်အောင် ယက်ပေးလိုက်ရသည်… နေမြတ်လင်းမှာ ပြီးဆုံးခြင်းအရသာခံရရုံမက အယက်ပါခံရင်း တကိုယ်လုံးတုန်တက်ကာ ဆီးသွားချင်သလို ဖြစ်လာတာမို့…….။
ကောင်မ ပါးစပ်ဟထားစမ်း ” လို့ပြောပြီး စံပယ်ရှင်းသန့်၏ မျက်နှာပေါ်သို့ သေးများပန်းချလိုက်သည်…. စံပယ်ရှင်းသန့်တယောက် နေမြတ်လင်းကြောင့် သေးတွေစိုသွားသလို သေးအချို့ကိုလည်း ပါးစပ်ထဲသောက်သုံးလိုက်ရတာမို့ ရေချိုးခန်းတွင် ပြန်လည်သန့်စင်ခဲ့ရပါတယ်….။နေမြတ်လင်းကတော့ အိမ်မက်မြူရဲ့ အွန်လိုင်း ကနေ မှာထားတဲ့ကရိယာတန်ဆာပလာတွေကို ထုတ်ယူပြီးကြည့်နေလေရဲ့… သူမှာထားတာတွေကလည်း ကြည့်အုံးလေ… ဖင်ပေါက်မှာ ထိုးတပ်ရတဲ့ ခွေးမြီးတစ်ခု ဗိုက်ဗရေတာခေါ် တုန်ခါစက်လေး ပြီးတော့ လီးတုတစ်ချောင်း… သူတို့က ဘီဒီအပ်အမ် မဆော့တာမို့ ကြာပွတ်တို့ ကြိုးလက်ထိပ် စတာတွေမလိုပေမယ့် စံပယ်ရှင်းသန့်လို မာနခဲ လူတွေအမြင်မှာ ရိုးရိုးအေးအေးယဉ်ယဉ်လေးပေမယ့် ကုပ်ကမြင်းလေး ဖြစ်နေတဲ့ သူမကို သူ့ရဲ့လိင်ကျွန်တစ်ယောက်လို နှိပ်စက်ဖို့ လိုအပ်တာမို့ သူလှမ်းမှာယူထားရခြင်းသာ….။
စံပယ်ရှင်းသန့်တယောက် ကြာနေတာမို့ စိတ်မရှည်သော နေမြတ်လင်းတစ်ယောက်… “စောက်ဖာသည်မ မပြီးသေးဘူးလား… ငါစောင့်နေတာကြာလှပြီ တံခါးဖွင့်ပြီး လေးဖက်ကုန်းထွက်ခဲ့စမ်း ” လို့ပြောတဲ့ အမိန့်သံအဆုံးမှာတော့ စံပယ်ရှင်းသန့်တစ်ယောက် လေးဖက်ကုန်းရက်သားလေးထွက်လာရတာကို နေမြတ်လင်းတယောက် အရသာခံကြည့်ပြီးအနောက်ကနေသွားကာ… ” ဖာသည်မရေ နင့်ကိုခွေးလိုးလိုးဖို့ ခွေးနဲ့တူရအောင် ဒီအမြီးတက်ပေးရမယ်… “ပြောပြောဆိုဆိုပဲ နေမြတ်လင်းတယောက် သူမဖင်ပေါက်ထဲကို အမြီးတပ်တဲ့ ဘုလုံးကို ထိုးထည့်လိုက်တယ်…. စံပယ်ရှင်းသန့်မှာ နာကျင်လှပေမယ့် သူမကို ဆဲသံ အမိန့်ပေးသံတွေကြောင့် စောက်ပတ်က စောက်ရည်တွေ တတောက်တောက်ကျပြီး အလိုးခံချင်စိတ်တွေ တဖွားဖွားပေါက်နေတာပေါ့…. “§ကောင်မ အဲ့အတိုင်း ကုတင်ထိလိုက်ပြီး ငါ့လီးစုပ်ပေး နင့်ကိုခွေးလိုးလိုးပြီးမှ အဲ့အမြီးဖြုတ်မယ်…” ပြောပြီး။
အိပ်ခန်းသို့ဝင်သွားသောနေမြတ်လင်းနောက်သို့ စံပယ်ရှင်းသန့်မှာ လေးဖက်ကုန်းလိုက်သွားရလေသည်…. အိပ်ခန်းထဲရှိ ကုတင်ပေါ်တွင် ပက်လက်လှန်သော နေမြတ်လင်းအပေါ် လေးဖက်ကုန်းအနေထားဖြင့် လီးစုပ်ရန်လုပ်ချိန်မှ နေမြတ်လင်းက ” နေအုံး ” ဆိုကာ သူမစောက်ဖုတ်ထဲသို့ တုန်ခါစက်လေးထိုးထည့်ပြီးမှ ပက်လက်ပြန်လှန်တာမို့ သူမလည်း အိပ်ပျော်နေသော နဂါးကို လက်နဲ့အသာနှစ်ချက်သုံးချက် ဂွင်းတိုက်ပြီး ပါးစပ်အတွင်းငုံကာ လီးစုပ်ပေးချိန်။နေမြတ်လင်းက ဗိုက်ဗရေတာ ရမုဒ်ကို ကစားပေးလိုက်နဲ့ သူမမှာ ဖင်ထဲက အမြီးရဲ့တစ်ဆို့ဆို့ကတမျိုး စောက်ဖုတ်ထဲက ဗိုက်ဗရေတာက နှိပ်စက်တာတကြောင်း မိမိကို ပက်ပက်စက်စက်ပြောပြီး လိုးမယ့်လူရဲ့လီးကို စုပ်ပေးနေရတာတွေကြောင့် နေမြတ်လင်းရဲ့လီး သူမပါးစပ်ထဲ တင်းပြည့်ကျပ်ပြည့်တောင်လာချိန်ပဲ သူမ တချီပြီးမြောက်ခဲ့ရသည်။နေမြတ်လင်းလည်း သူမပီးမှန်းလည်းသိ သူကိုယ်တိုင်လိုးဖို့ အသင့်ဖြစ်တာနဲ့ပဲ…. “။
စောက်ဖာသည်မ လီးစုပ်ရမဝသေးဘူးလား တော်တော့ ငါလိုးချင်ပြီ ဒီလောက်လီးကြိုက်တဲ့ ကြိုက်ကုန်းမ ဖင်ရော စောက်ဖုတ်ရော ကွဲအောင် လိုးပစ်မယ် ” လို့ပြောပြီး ထကာ လေးဖက်ကုန်းထားသော စံပယ်ရှင်းသန့် နောက်သို့သွားကာ နောက်တွင် ပြူထွက်နေပြီးစောက်ရည်တွေရွှဲနေသော စောက်ဖုတ်ဝတွင် လီးကိုတေ့ပြီး မညှာတမ်း တဆုံးထိုးချပစ်လိုက်သည်… စံပယ်ရှင်းသန့်မှာ စောက်ရည်တွေရွှဲနေလို့ လီးအဝင်ချောသော်လည်း မညှာတာပဲ တဆုံးထိုးဆောင့်လိုးခံရတာမို့ လီးမှာ မကြီးလှသော်ငြား ဒစ်ကတမျိုး ဂေါ်လီကတဖုံ အရှည်က ၆လက်မကျော်သည်မို့ အတော်ခံစားလိုက်ရသည်….။နေမြတ်လင်းကား စံပယ်ရှင်းသန့် ဘယ်လိုနေမလဲ သူမတွေးပဲ သူမခါးကိုကိုင်ကာ တဘွတ်ဘွတ်မြည်အောင် ဆောင့်လိုးနေလေသည်… လေးငါးဆယ်ချက်ခန့် ဆောင့်လိုးပြီးသော် စံပယ်ရှင်းသန့်မျက်နှာရှေ့တွင် ဒူးထောက်ကာ လီးစုပ်ခံ၏… စံပယ်ရှင်းသန့်က လီးကို လေးငါးခါလောက် စုပ်ပေးပြီးလျင်။
စောက်ဖုတ်ကို ပြောင်းလိုးပြန်၏… ပါးစပ်မှလည်း… “ဖာသည်မ ငါလိုးမ ငါလိုးတာ ကောင်းတယ်မလား… စောက်ကြိုက်ကုန်းမ ငါ့လီးကိုကြိုက်နေတယ်မလား… လီးဆာမ ” စသည့် ယုတ်မာရိုင်းစိုင်းသော ဆဲနည်းတွေများစွာဖြင့် ဆဲသလို သူမဖင်ကိုလည်း တဖြန်းဖြန်းရိုက်၏… စောက်ဖုတ်လိုး လီးစုပ်ခိုင်း၍ အားမရသေး ဖင်မှအမြီးကို ချွတ်ကာ ဖင်ကိုလိုးပြန်သေးသည်… စံပယ်ရှင်းသန့်မှာလည်း အဆဲခံရလေ စိတ်လှုပ်ရှားလေ ဖြစ်ကာနောက်ကို ဖင်ကြီးပစ်ပစ်ပေးကာ ပါးစပ်မှလည်း…. ” လိုးပါ… ဒီကြိုက်ကုန်းမ အကို့ရဲ့ ဖာသည်မကို စောက်ဖုတ်တွေ ဖင်တွေကွဲအောင်သာ ဆောင့်လိုးပစ်ပါ “လို့ ညစ်ညမ်းစွာပြောရင်း မိနစ် ငါးဆယ် တစ်နာရီသာသာလောက်မှာတော့ နေမြတ်လင်းမှာ ဒုတိယအချီပြီးချင်လာတာမို့ သူမကို ထိုင်စေကာ မျက်နှာကို ဆွဲမော့ လီးကိုဂွင်းတိုက်ပြီး လီးရည်များကို သူမမျက်နှာပေါ်ပန်းထုတ်ပစ်ရုံမက လျှာထုတ်ကာ လျှာကိုလီးနဲ့တဗတ်ဗတ်ရိုက်ပြီး။
လီးရည်အကုန်စစ်ထုတ်ကာ ကုတင်ပေါ်လှဲကာ အနားယူမှေးစက်လိုက်တော့သည်…။တရေးအိပ်စက်လို့ အားပြည့်သွားချိန်မှာတော့ နိုးလာပြီးကြည့်တော့ စံပယ်ရှင်းသန့်တစ်ယောက် သူ့အားဖက်ကာ အိပ်စက်နေတာကို ကြည့်ပြီး ဖြူစင်စွာလှတဲ့ မိန်းမလှလေးတစ်ယောက်မို့ သူနှိပ်စက်တာကိုခံ သူ့ရဲ့လိင်ကျွန်အဖြစ်နေနေတာက သူမထန်ရုံတမျိုးထဲကြောင့် မဟုတ်ဘူးဆိုတာ သူသိပေမယ့်သူ့ရဲ့စိတ်ထဲမှာကို သူမကို အနိုင်ရချင်တဲ့စိတ်က ပိုပြင်းထန်နေသည်… ။ထိုစဉ်မှာပဲ သူမလူးလွန့်ပြီး မျက်စိဖွင့်လာတာမို့ သူအသာကိုယ်လုံးကိုကြွကာ ကုတင်ပေါ်ရှိ ဆေးလိပ်ဗူးက ဆေးလိပ်ကိုယူကာ မီးညှိကာ ဖွာရှိုက်လိုက်သည်… စံပယ်ရှင်းသန့်မှာ နိုးထလာသည်နှင့် သူ့တာဝန်ကို သိသည့်နှယ် နေမြတ်လင်း လီးကိုကိုင်ကာပွတ်သပ်ဆော့ကစားဂွင်းတိုက်ရင်းမှ …. ” အကို အကို့ကို လက်ဆောင်တခုထပ်ပေးမယ်နော်… အကို လင်းလက်မြင့်ဝေဆိုတဲ့ ဆယ်လီမကို လိုးချင်တယ်လို့ ပြောဖူးတယ်နော်။
သူအစစ်မဟုတ်ပေမယ့် သူနဲ့ဆိုဒ်တူ ကိုယ်လုံးကိုယ်ပေါက်တူရင် အကိုကြိုက်မယ်ထင်တယ်… စံပယ့်သူငယ်ချင်းတယောက်က စံပယ်တို့အကြောင်း အကုန်သိထားပြီး သူကလည်း အကိုနဲ့ ခံကြည့်ချင်လို့တဲ့ အဲ့သာ ခဏနေသူလာလိမ့်မယ်အကို… ။အကိုအိပ်ပျော်တော့ စံပယ်ဖုန်းဆက်ခေါ်ထားပြီးပြီ… သူ့ကိုပဲ လင်းလက်မြင့်ဝေလို့မှတ်လိုက်ပေါ့… ” လို့ပြောတော့ နေမြတ်လင်းလည်း အကြိုက်ပိုတွေ့ကာ…. ” အင်းလေ သူက ခံချင်သပဆိုလည်း လိုးပေးရတာပေါ့… သရီးစမ်းကြတာပေါ့ကွာ ခေါ်လိုက်ပါ ” လို့ပြောတော့ သဇင်ရှင်းသန့်တစ်ယောက် ဖုန်းကိုယူကာ သူ့သူငယ်ချင်းအား လှမ်းခေါ်လိုက်သည်…. ဆယ်မိနစ်လောက်အကြာမှာတော့ သူ့သူငယ်ချင်းရောက်ရှိလာ၍ စံပယ်က တံခါးကို ထဖွင့်ပေးတော့ ဝတ်လစ်စလစ်နဲ့ စံပယ်ရှင်းသန့်ရဲ့ ကျော့ရှင်းတဲ့ စံပယ့်နောက်ကိုကြည့်ပြီး ငါလိုးခဲ့တာ တကယ့်အမိုက်စားပါလားလို့ အတွေးနဲ့ ကျေနပ်နေတုန်း…. စံပယ့်သူငယ်ချင်းဖြစ်သူ ဝင်လာကာ…. ”။
ဟယ်ကောင်မ အဝတ်တထည်တောင်မကပ်ဘူး ပွဲကြမ်းနေတယ်ပေါ့လေ… ထချက် ဟီးဟီး “ဆိုပြီး သူတို့အချင်းချင်း စနောက်ပြောသံတွေကို နေမြတ်လင်းကြားနေရတယ်…. ပြီးတော့ မကြာခင်ပဲ နှစ်ယောက်သား အိပ်ခန်းသို့ဝင်မယ်အလုပ်မှာ နေမြတ်လင်းက….” လင်းလက် မင်းပါ အဝတ်တွေ ချွတ်လာခဲ့… ငါမင်းကို ကြည့်မယ်” လို့အမိန့်ပေးသံအဆုံးမှာ စံပယ်ရော လင်းလက်မြင့်ဝေနေရာသရုပ်ဆောင်ပေးမယ့် စံပယ့်သူငယ်ချင်းပါ ဝတ်လစ်စလစ်နဲ့ ဝင်လာခဲ့ကြတယ်။လင်းလက်ကိုကြည့်တော့ တကယ်သူလိုးချင်နေတဲ့ လင်းလက်အောင် ခေါ် လင်းလက်မြင့်ဝေလိုပဲ နို့ကြီးကြီး ဖင်ကြီးကြီး စောက်ဖုတ်ဖောင်းဖောင်းနဲ့ရယ်… ။မျက်နှာသိပ်မတူပေမယ့် နှုတ်ခမ်းမှာသွားတူနေပြန်သည်… ဒီလောက်ဆို သူကျေနပ်ပြီလေ နေမြတ်လင်းလည်း….. ” လင်းလက် မင်းရဲ့နှုတ်ခမ်းတွေ လျှာတွေနဲ့ ငါ့လီးကို လာစုပ်ယက်ပေးစမ်း… စံပယ် မင်းက ငါ့ခြေမတွေအရင်စုပ်ပေး ပြီးမှ ဖြည်းဖြည်းခြင်း အပေါ်တက်လာပြီး လင်းလက်ရဲ့ ဖင်နဲ့ စောက်ဖုတ်ကို ယက်ပေးလိုက်… “နေမြတ်လင်းရဲ့ အမိန့်ကို နှစ်ယောက်သား စောဒက မတက်ဝံ့…။
နေမြတ်လင်းခိုင်းသမျှကို လုပ်ပေးကြဖို့ အသီးသီး ခုတင်ပေါ်တက် နေရာယူလိုက်ကြသည်…. ထို့နောက် နေမြတ်လင်းမှာ လင်းလက်ရဲ့ ကျွမ်းကျင်တဲ့ လီးစုပ်ပေးနေမှုကို စတင်ခံစား ဇိမ်ယူရင်းကသူအရမ်းလုပ်ချင်နေတဲ့ လင်းလက်အောင်ကို မျက်စိထဲသွားမြင်ကာ ပိုမိုစိတ်ကြွလာပြီး လင်းလက်ရဲ့ ခေါင်းကို ဖိကာဖိကာ ပါးစပ်ကို လိုးနေချိန်မှာ…. စံပယ်ရှင်းသန့်တစ်ယေက် နေမြတ်လင်းရဲ့ ခြေမတွေကို ခဏတာစုပ်ပေးပြီး။နေမြတ်လင်းရဲ့ ခြေသလုံး ခြေကျင်းဝတ်တို့ကို လျှာနဲ့တို့ထိကစားပြီး ဖင်ကြီးထောင်ကာ နေမြတ်လင်းအား လီးစုပ်ပြီး အပီပြုစုနေတဲ့ လင်းလက်အောင်ရဲ့ စောက်ဖုတ်မှသည် ဖင်ဝတိုင်အောင် လျှာဖြင့်သိမ်းယက်တော့ လင်းလက်အောင်တယောက် အသဲခိုက်အောင် ယားသွားသည်မို့ အသံထွက်ညည်းချင်ပေမယ့် နေမြတ်လင်းက ခေါင်းကိုမလွှတ်တမ်းကိုင်ကာ ဖိချနေသည်မို့… အု အု ဆိုသောအသံသာ ထွက်လာသည်……။
နေမြတ်လင်းမှာ လင်းလက်အောင်ရဲ့ ပါးစပ်ကို စိတ်ကြိုက်လိုးပီးသောအခါ သူ၏လီးကြီးမှာ တံတွေးများဖြင့် တင်းပြောင်ကာ မာတောင်ရုံမက သူ့ဂေါ်လီအတောင့်ကြီးကလည်း ထင်းလင်းစွာ ပေါ်နေသည်…. “လင်းလက်အောင် ဖင်ထောင်ပေးစမ်း… နင့်ဖင်ကြိ်ီးက လိုးလို့ကောင်းမယ်… ဟိုကောင်မစံပယ်… နင်လင်းလက်ရဲ့ စောက်စေ့ကို ယက်ပေးလိုက်စမ်း “လို့ နေမြတ်လင်းရဲ့ အမိန့်အဆုံးမှာတော့ လင်းလက်အောင်က မွှေ့ယာပေါ်ကိုယ်ကိုမှောက်ချ ဒူးကိုထောက်ပြီး ဖင်ကိုထောင်ပေးထားလိုက်သည်…။စံပယ်ကလည်း နေမြတ်လင်းခိုင်းတဲ့အတိုင်း လင်းလက်အောင် ဖင်ထောင်ထားတဲ့အောက်မှ ခေါင်းလျိုဝင်လိုက်ရာ နေမြတ်လင်းက စံပယ့်စောက်ဖုတ်ထဲ တုန်ခါစက်လေးကို ထည့်ပေးလိုက်ပြီး ရမုဒ်ကို လင်းလက်အောင်လက်ထဲထိုးထည့်လိုက်သည်…. ။ထို့နောက် သူတို့နှစ်ယောက်ကို ကားယားခွကာ လင်းလက်အောင်ဖင်ဝစူပွပွကို လီးတေ့ပြီး ဒစ်ကို ထိုးသွင်းလိုက်သည်…..။
လင်းလက်အောင်မှာ ဖင်ခေါင်းထဲ လီးဒစ်ကြီး တိုးဝင်လာသည့် ဒဏ်ကြောင့် တစ်ဆို့ဆို့နဲ့ ခံရခက်သလို စံပယ်က စောက်စေ့ယက်ပေးနေလို့ တမျိုးကောင်းပြီး အရသာနှစ်ခုရောထွေးကာ …အီး… ခနဲ ငြီးသံပေးပြီး လက်သီးစုပ်တော့ တုန်ခါစက်ရမုဒ်လေးကို ဖိမိရာ စံပယ့်ခမျာ ထွန့်ထွန့်လူးရပြန်သည်…. နေမြတ်လင်းကလီးကို တဆုံးထိထိုးထည့်ပြီး ဖြည်းဖြည်းနှဲ့လိုးလိုက် ကြမ်းကြမ်းဆောင့်လိုးလိုက်နဲ့မို့ လင်းလက်အောင် ဖင်ဇိမ်တွေ့ကာ စောက်ရည်တွေ ဒလဟောထွက်လာသလို စံပယ်မှာလည်း တုန်ခါစက်ဒဏ်ကိုမျော့နေအောင်ခံစားရသည်… နေမြတ်လင်းမှာ သူမှန်းပြီးထုနေတဲ့ လင်းလက်အောင်ဖင်နဲ့တူတဲ့ ဖင်ကို လိုးနေရသည်မို့. စိတ်ပိုကြွကာ ဆောင့်လိုးနေရာမှ ညောင်းလာတာမို့ ။ဖင်ထဲမှ လီးကိုချွတ် လင်းလက်အောင်ရဲ့ ခြေထောက်တဖက်မကာ ပက်လက်လုပ်ပြီး စောက်ဖုတ်ဝကို လီးတေ့ပြီး တရှိန်ထိုး ဆောင့်သွင်းပစ်သည်…. လီးတဆံးဝင်ပြီး ဆီးခုံနှစ်ခုကပ်ချိန်မှာ။
“စံပယ် လီးတု ယူထားပေးစမ်း ” လို့ပြောပြီး လင်းလက်အောင်ရဲ့ နို့ကိုကိုင်ပြီး ခြေထောက်နှစ်ချောင်းကို ထမ်းပြီး ဆောင့်လိုးပစ်ရာ….လိုးသံတဖတ်ဖတ်နဲ့ လင်းလက်အောင်ရဲ့ ညီးသံတချို့က အခန်းမှာ စီနေအောင်ထွက်ပေါ်လာသည်…. စံပယ်မှာ နေမြတ်လင်း လီးတုယူခိုင်း၍ ယူပေးလာပေမယ့် လင်းလက်အောင် လက်သီးစုပ်လိုက်တိုင်း သူ့စောက်ဖုတ်ထဲက တုန်ခါစက်ကြောင့် စောက်ရည်တွေက ပေါင်မှနေစီးကျနေသည်…. နေမြတ်လင်းက… လင်းလက်အောင်ကို လိုးနေရင်းက” ဟိုဖာသည်မ နင့်စောက်ဖုတ်ထဲကဟာကို ထုတ်တော့… ဖီးတက်မနေနဲ့ ပြီးရင် အဲ့လီးတု နင့်စောက်ဖုတ်ထဲ ဝင်သလောက်ထည့် ကိုယ့်ဖာသာလိုးထား…ငါဒီဟာမကို ဝအောင်လိုးအုံးမယ်…. အားပါး ကောင်းလိုက်တာကွာ…. စောက်ဖုတ်ကလည်း ဖောင်းပြီးစီးနေတာပဲ… ။ဖင်လိုးတုန်းကလည်း ကြပ်နေတာပဲ…လီးစုပ်လည်းတော်တယ်…ပြီးမှ လီးတုနဲ့ ငါ့လီး သူ့ဖင်နဲ့ စောက်ဖုတ်ကို ညှပ်ချအုံးမယ်….”။
ပြောလည်းပြော လိုးလည်းလိုးရာ လင်းလက်အောင်ခမျာ မျက်လုံးပင်ပြူးချင်ဖြစ်ပြီး စိတ်ထဲပိုလှုပ်ရှားသွားကာ… ” ။လိုး လိုး…ရှင်လိုးချင်သလောက်လိုး လိုးချင်သလိုသာလိုး စောက်ဖုတ်နဲ့ ဖင်တဆက်ထဲဖြစ်အောင် ကွဲသွားပစေ လိုးပလိုက်.. အမလေးနော်… ဒစ်ကြီးကလည်းထိ ဂေါ်လီကြီးကလည်းထိ ကောင်းလိုက်တာ….ဆောင့်လိုးပစ်ပါ “အော်ရင်းနဲ့ပဲ….နေမြတ်လင်း ဆောင့်လိုးသမျှကို ခံနေရာမှ အချက်၇၀ခန့်မရှိတရှိမှာတော့ အပေးအယူညီမျှမှုတွေကြောင့် နေမြတ်လင်းမှာ ပြီးချင်လာတာနဲ့ ပိုမြန်မြန်ဆောင့်လိုးပြီး…. ” အား…ငါပြီးတော့မယ် လင်းလက်ရေ မင်းရော “” ကျမလည်း ပြီးပြီ ဆောင့်ဆောင့် ပြီးရင် ကျမနို့ပေါ်နဲ့မျက်နှာပေါ်လီးရည်တွေ ဖြန်းချပေးပါ “ဆိုတာနဲ့ နေမြတ်လင်းလည်း စောက်ဖုတ်က လီးကိုချွတ် လင်းလက်အောင်ပေါ် မတ်တပ်ခွရပ်လိုက်ပြီး လင်းလက်အောင်နို့နဲ့ မျက်နှာပေါ် ဂွင်းတိုက်ကာ လီးရည်များ ဖြန်းထုတ်လိုက်သည်…ပြီးမှ…. ” ဟိုကောင်မ စံပယ်….။
ငါ့လီးကို သန့်ရှင်းရေးလာလုပ်ပေးအုံး ” လို့ဆိုတော့ စံပယ့်ခမျာ သူတို့လိုးတာကိုကြည့် ကိုယ့်ဖာသာ လီးတုနဲ့လိုးလို့ ပြီးစနားမယ်ကျန်သေး နေမြတ်လင်းရဲ့ လီးကို ပြန်စုပ်ပေး လျှာနဲ့ ယက်ပေးကာ သန့်ရှင်းရေးလုပ်ပေးလိုက်ရသည်….။လင်းလက်အောင်နဲ့ စံပယ်ရှင်းသန့်ကို တနေကုန်လိုးပြီးသောအခါ ညနေစောင်းမှာ လင်းလက်အောင်ပြန်သွားပေမယ့်… နေမြတ်လင်းက မပြန်သေးပဲ စံပယ်ရှင်းသန့်ကို ထပ်မံနှိက်စက်ဖို့ ကျန်နေခဲ့လေသည်…. ” ဟဲ့ဖာသည်မ ငါရေချိုးမယ် လိုက်ချေးတွန်းပေးစမ်း ” ဆိုကာ ကိုယ်တုံးလုံးဖြင့် ရေချိုးခန်းသို့ဝင်သွားသော နေမြတ်လင်း နောက်သို့ အဝတ်ဗလာဖြင့် လိုက်ရပြန်သည်…နေမြတ်လင်းရဲ့ တကိုယ်လုံးကို ဆပ်ပြာတိုက်ပေးရုံမက လီးပါသေချာဆေးပေးရသည်…လျှာဖြင့်ယက်ပေးရသည်… ပြန်ထွက်တော့လည်း ဘာမှပေးမဝတ်ပဲ ကိုယ်တုံးလုံးဖြင့် စားစရာ စီစဉ်ခိုင်းသည်….သူစားနေချိန်မှာ သူ့ရှေ့တွင် ကုန်းပြီး ကြမ်းတိုက်ခိုင်းကာ သူကမျက်စိအရသာခံ ကြည့်နေသည်….။
နေမြတ်လင်းမှာ စံပယ်ရှင်းသန့်တယောက် မိမွေးတိုင်းဖမွေးတိုင်း လှပကျော့ရှင်းသော ကိုယ်လုံးလေးဖြင့်လေးဖက်ကုန်းကာ ကြမ်းတိုက်စဉ် နောက်တွင်ပြူထွက်နေသော စောက်ဖုတ်နှင့် ဖင်တွေကိုကြည့်ပြီး မိမိစိတ်ကြိုက် အသုံးတော်ခံထားရသည်ကို တွေးရင်းအထူး ကျေနပ်အားရနေသည်…။နောက်ဆုံးအဆင့်အနေနဲ့ မိမိစိတ်ချခင်မင်ရဆုံး သူငယ်ချင်းတယောက်နှင့်ပေါင်း နှစ်ယောက်တစ်ယောက် ညှပ်ချဖို့ထိ ဆုံးဖြတ်ထားသည်… သူမသည် သူ့လက်ခုပ်ထဲကရေလို ဖြစ်နေသည်… သူဘာမှကြိုးမကိုင်ရပဲ အကျပ်မကိုင်ရပဲကို သူမ၏ ပင်ကိုယ်စိတ်ကြောင့်ပင်… သူမကိုသူမမသိသော အတွင်းစိတ်သဏ္ဍန်က သူ့အတွက်အကြိုက် ဖြစ်နေစေခဲ့သည်… သူစားပြီးသောအခါ… ” ဟိုကောင်မ လာအုံး လေးဖက်ကုန်းပီးပဲလာခဲ့ ” ” ဟုတ်ကဲ့ “ဆိုကာ နေမြတ်လင်းရဲ့ အမိန့်အတိုင်း လေးဖက်ကုန်းပြီးရောက်လာချိန်…. ” ဖာသည်မ ငါ့လီးစုပ်ခိုင်းမို့ ခေါ်နေတာ လာ လီးလာစုပ်စမ်း။
“နေမြတ်လင်းရဲ့ ကြမ်းတမ်းတဲ့ အမိန့်အဆုံးမှာ စံပယ်ရှင်းသန့်တယောက် စောက်ဖုတ်လေးများပင် ရှုံ့သွားသည်ထိ စိတ်လှုပ်ရှားကာ အရည်ကြည်များ ထွက်လာသည်… ပြင်ပမှာ မိမိကိုဆဲဖို့ မပြောနဲ့ စကားမာမာနဲ့ ကျောသလိုပြောတာတောင် မကြိုက်တဲ့သူမက သူမကို ဖာသည်မလို့ဆဲပြီး ဖာသည်တစ်ယောက်လို ဆက်ဆံတာကို အထူးကျေနပ်စိတ်လှုပ်ရှားသည်…။လူတိုင်းက ဖူးဖူးမှုတ်ထားတဲ့ အလှဘုရင်မလေးကို ထိုသူက သူ့ကျွန်တယောက်လို ကြေးစားဖာသည်တစ်ယောက်လို ကြင်နာမှုမရှိသမျှ သူမရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားခဲ့ရသည်…. အခုလည်း သူ့လီးကြီးကို သူမစုပ်ပေးနေတာကို အားရပုံမပေါ်ပဲ သူမခေါင်းကိုကိုင်ကာ ကော့ကော့ပြီး သူမပါးစပ်ကို လိုးနေသလို…..ပါးစပ်ကလည်း…. ” တော်တော်လီးကြိုက်တဲ့ ဖာသည်မ စုပ်စမ်း… ကောင်းလိုက်တာ လီးဒီလောက်ကြိုက်တဲ့ ကြိုက်ကုန်းမ ဒီလီးတင်မက နောက်လီးတွေလည်း ကြုံရအောင် နင့်ကို လုပ်ပေးအုံးမယ်… စုပ်စမ်း ဆိုပြီး။
တဖွဖွရွတ်သံ ဆဲသံတွေ ကြားမှာ သူမစောက်ဖုတ်က စောက်ရည်တွေ စီးကျနေလေရဲ့… သူမကို သူ့အပြင်တခြား လူတွေနဲ့ပါ ပေးလိုးအုံးမယ်တဲ့… ဘယ်လိုလူတွေများလဲ….စတဲ့အတွေးတွေနဲ့ သူမပါးစပ်ထဲညှောင့်လိုးလားတဲ့ လီးကို အားရစွာ စုပ်ပေးနေစဉ်ပဲ… သူမခေါင်းကို ဆောင့်တွန်းကာ…. ” ဖာသည်မ လီးစုပ်လို့ကို မဝနိုင်ပုလား… ငါလိုးချင်ပြီ… ဖင်ထောင်ပေးထားစမ်း… နင့်ဖင်ကို အရင်လိုးမယ်… ”။လို့ဆဲ့သံနဲ့ ပါးစပ်ထဲက လီးက သူမနှုတ်ခမ်းဘေးသားတွေကို ချိတ်ကာ ပလွတ်ခနဲမြည်အောင် ထွက်သွားလို့ အနည်းငယ်နာကျင်ပေမယ့် သူ့အမိန့်သံကြောင့် သူမ ကြမ်းပြင်မှာ အားလျားမှောက် ဖင်ထောင်ပေးလိုက်ရသည်….။နေမြတ်လင်းတစ်ယောက် ကြမ်းပြင်မှာ ဖင်လေးထောင်ထားသော စံပယ်ရှင်းသန့်ရဲ့ ဖင်ဝကို ထွီခနဲ မြည်အောင် တံတွေးထွေးချလိုက်ပြီး… ဖင်ဝကို လီးတေ့ကာ ကြမ်းကြမ်းပဲ ဆောင့်ထိုးတော့ ” အ: ..နာလိုက်တာ ဖြည်းဖြည်းလုပ်ပါရှင် ” လို့ စံပယ်ရှင်းသန့်တယောက် တောင်းပန်ပေမယ့်… နေမြတ်လင်းကတော့ ” ဖာသည်မ နင်က နာသေးလား ဒီလောက်လိုးထားလို့ အပေါက်ကျယ်နေပြီကို။
နာရင် နင့်စောက်စေ့ နင်ချေနေလေ မသာမ ငါ့ကို လာပြီး ဖြည်းဖြည်းလုပ်ပါ မြန်မြန်လုပ်ပါ နင့်မှာ ပြောခွင့်မရှိဘူး ငါလိုးချင်သလို လိုးမှာ နင့်စောက်ဖုတ်တွေ ဖင်တွေ ပြဲနေအောင်လိုးပစ်မှာ သိလား။စောက်ကောင်မရဲ့… ” ရင့်သီးတဲ့ စကားတွေကိုကြားရပြီး သူမဖင်ကြွက်သားတွေက သူ့လီးကို ညှစ်ကစားလိုက်သလို သူမစောက်ဖုတ်က စောက်ရည်တွေ ဒလဟော လိုက်လာသည်… သူမပြီးချင်နေပြီ… သူလီးထည့်ရုံရှိသေးတာ… သူ့အမိန့်သံကြောင့် သူမပြီးချင်နေပြီ… ” ဟုတ်ကဲ့ပါ အကို့စိတ်ကြိုက်သာလိုးပါရှင် အကို့ရဲ့ ဖာသည်မလေးပါ … အကို့ဖာသည်မကို အကိုကြိုက်သလိုလိုးပါ ” လို့ သူမမထင်မှတ်ချိန် သူမပါးစပ်က ထွက်ပေါ်လာတဲ့ စကားတွေကြောင့်ပဲ သူမမှ တကြောင်းပြီးသွားခဲ့ပေမယ့် နေမြတ်လင်းရဲ့ ကြမ်းတမ်းတဲ့ ဖင်လိုးမှုကို စောက်စေ့လေးကျိန်းနေအောင် ချေရင်းက…။သူမသိသည်… အကိုတယောက် သူ့ဖာသည်မလေး ကျမကို သူလီးတောင်တိုင်း လိုးနေမယ်ဆိုတာ…ဒီတညဟာ… ကျမရဲ့ စောက်ဖုတ်တွေ ဖင်တွေပြဲနေအောင် အလိုးခံရအုံးမယ်… အကို့ရဲ့ ဆဲသံဆိုသံတွေနဲ့ အမိန့်သံတွေကြားမှာ မိုးလင်းမယ်ဆိုတာ……ပြီးပါပြီ။
Categorized as အငျးဆကျ Tagged အသဲခိုကျအောငျ